Soa ihany, ny fotoam-pihetseham-pandihizana natao tamin'ny fampiofanana efa hatry ny ela, ary ny mpitaingin-tsoavaly manodidina ny vanim-potoana iray ihany no efa lasa taloha. Ankehitriny, ny akanjon'ny fanatanjahatena ho an'ny tovovavy dia mahafinaritra loatra ka te-hanao azy ireo hatrany hatrany.
Ny akanjo fitafy ho an'ny tovovavy dia manolotra ny fifandraisana maoderina sy marina ary ny fahazoana Accessories, toy ny fomba hafa. Na izany aza, manaraka ny lamaody, zava-dehibe ny tsy hanadino ny zavatra manan-danja indrindra - momba ny fanao sy ny fahazoana fitafiana, satria ny asany dia tsy vitan'ny manamboatra anao ihany:
Ny akanjo fitafy ho an'ny tovovavy dia midika ny fanatrehana fanatanjahan-tena manokana sy kiraro, kiraro na kiraro, t-shirts, rivotra sy kiraro, izay tsy maintsy ilaina ho an'ny fanatanjahan-tena ataonao;
Tadidio: ny fanatanjahatena ho an'ny vehivavy feno dia tsy natao hanitsy ny endrika, tokony ho tsara sy marina izany. Ho an'ny setroka iray mahazatra dia azo atao ny manampy tsindrin-tsakafo manokana na fanitsiana lambam-pandehanana izay hanampy amin'ny famoahana ireo tahiry be loatra tafahoatra kokoa;
Ny akanjo dia tokony "maka rivotra" - vita amin'ny lamba voajanahary na singa manokana, izay manala tanteraka ny hafanana sy mitazona hafanana;
Ny akanjo fitafy ho an'ny tovovavy dia tsy tokony hanakana ny hetsika - tokony ho mora amin'ny fihomehezana, hiondrika, hanao fanafihana (raha azo antoka - azonao atao izany ao amin'ny efitrano fiandrasana);
Ny akanjom-behivavy fanatanjahan-tena dia natao mba hanomezan'ny vatana fahafaham-baratra, hanaisotra ny fahamendrehana sy ny fahatsapana ny hatsembohana, ary koa ny hanamaivana mora foana; Noho izany, ireo karazan-javamaniry voajanahary voajanahary sy ireo fanatanjahan-tena manintona manokana dia mety;
Karazan'ireo vehivavy ara-panatanjahan-tena - tsy an-trano mihitsy no natao ho an'ny shorts fa tsy an-jatony! Ny mozika amin'ny fanatanjahan-tena matetika dia manana fiantraikany manohana fanampiny, izay manampy koa ny manome endrika tsara amin'ny akoho;
Na inona na inona ataonao, dia tsara ny mitaingina mpitaingin-tsoavaly eny amin'ny kirarony sy kirarony - dia tena marefo io faritra io, ary zava-dehibe ny mitazona ny fahasalamany amin'ny fomba hafa. Raha vao avy nahazo tsindry iray lavalava ianao, fara fahakeliny, na nibontsina ny tongotrao, dia zava-dehibe ny manao amin'ny tennis avo indrindra izay manamboatra ny kitrokely ary miaro anao amin'ny ratra;
Ny fanatanjahantena ara-panatanjahan-tena ho an'ny vehivavy dia tokony atao amin'ny endrika fanatanjahan-tena ara-panatanjahan-tena manokana izay maka ny hafanana ary manalavitra ny vokatr'ilay "miverina miverina" ary afaka mankafy malalaka ny fanatanjahantena. Ny variana toy ny pantyhose voatifitra ao anaty fitongilana ara-dalàna dia tsy mety!
Rehefa misafidy iray dia tokony ho tarihina amin'ireo toetra rehetra ireo aloha ary avy eo - amin'ny alalan'ny famolavolana. Satria ny hatsaran'ny akanjonao dia miankina amin'ny vokatry ny kilasinao!
Fitaovana modely ho an'ny zazavavy
Ny fivarotan'ny fanatanjahan-tena ataon'ny vehivavy amin'izao fotoana izao dia manenjika ireo safidy manintona indrindra. Afaka misafidy andian-karazany maro ianao, arakaraka izay tianao sy mandeha. Ohatra, ny akanjo marevaka matevina ankehitriny, sy ny leggings, ary Ao amin'ny tendrony malaza ihany koa ny dikan-tenin'ny fitondran'ireo kiraro fanatanjahan-tena, izay mifanentana amin'ireo tovovavy tena hafa - sady somary marefo.
Ny ampahany ambony amin'ny lamaody fanatanjahan-tena lamaody dia mety ho rivotra fanatanjahan-tena sy sweatshirt. Raha mifidy akanjo avy amin'ny ampahany manokana ianao ary manao fampiharana fotsiny ao amin'ny efitrano, azonao atao ny manala kiraro fanatanjahan-tena na T-shirt. Amin'izao andro izao, manintona ny saina ny fampifangaroana loko, mifanohitra amin'ny loko.
Aza hadinoina fa ny kiraro dia tsy milalao ny ampahany kely indrindra amin'ny sarinao - miezaha haka ireo kiraro tsara amin'ny lokony.
Sakafo gymnastika ho an'ny fampisehoana
Fehezana mahafinaritra amin'ny dahlias, hydrangeas sy roses: 3 fomba tsotra fampakaram-bady
Ny sata sosialy sy ny fahasalamana ara-tsosialin'ny olona
Salady voankazo amin'ny yoghurt - fomba tsotra
Ahoana no hijerena sexy?
Ho an'iza moa ny solomason'ny saka?
Fifandraisana tsy misy fifandraisana
Cosmetics amin'ny tànana manokana - fomba fitsaboana
Fanafody ho an'ny moka
Tabilao ho an'ny varotra tsara
Ny menaka tongolo - recipe
Famantarana ny fitondrana vohoka amin'ny saka
Roman Alan Rickman sy Emma Watson
Lasibatra mihintsana amin'ny fantsika
Grammaine miaraka amin'ny faniriana